Markabkii ugu horreeyay ee dhex dhexaad ah ayaa durba ku jira hawada sare | War gadget
Dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee dhex dhexaad ah ayaa durba ku jira hawada sare
Ma aha markii ugu horreysay ee aan ka hadalno barnaamijka 'ActualidadGadget' xiisaha ay baarayaal badan iyo taageerayaasha safarka hawada sare ku leeyihiin sida bani'aadamku u gaari karo meerayaasha kale. Fikradda ay kooxdani leedahay waa mid si sax ah u ah tan shaqeeyaan oo raadiyaan dariiqooyin sahamin kala duwan kuwa raacsan wakaaladaha kaladuwan ee booska adduunka, taas oo muujineysa in maskax kale suurtagal tahay.
Waa in la aqoonsadaa in mid ka mid ah hamiga weyn ee aadanaha, ugu yaraan maadaama aan leenahay isticmaalka xusuusta iyo sheekooyinka ay waalidiinta u gudbiyaan carruurta, inay si sax ah u tahay inaan ku dhex safri karno xiddigaha, fikrad asal ahaan ka soo baxday daraasado badan, buugaag iyo filimaan aan tiro lahayn iyo xitaa ciyaaro fiidiyow ah. Illaa iyo hadda fikrad aad u fog oo aadamuhu u qabo, ugu yaraan illaa sayniska u gudbay illaa maantadan la joogo isagoo u oggolaanaya fikradaha kala duwan run noqon kara.
1 Breakthorugh, koox saynisyahanno ah oo awood u leh inay siyaabo kale ugu sahamiyaan Caalamka
2 Sprite, markab interstellar ah oo kaliya dhexroor 3,5 sentimitir ah iyo 4 garaam oo culeys ah
3 Maraakiibtaan ayaa la filayaa inay ku gaaraan Alpha Centauri 20 sano oo kaliya.
Breakthorugh, koox saynisyahanno ah oo awood u leh inay siyaabo kale ugu sahamiyaan Caalamka
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, way ka fududdahay in la fahmo waxa koox cilmi baarayaal madaxbanaan iyo nooc kasta oo dad ah oo leh aqoon guud iyo dano ku saabsan hormarka farsamada noocan ah ay sameynayaan. Tan awgeed, wax la mid ah sanad ama ka hor ayaan ka baranay abuurka Breakthorugh, waa urur waqtigaan oo dhan kadib uun shaaciyay inay ugu dambayntii gaadheen hadafkoodii.
Hadda, ka hor intaadan sii wadin, qiran inaanan ka hadleynin koox leh maalgelin ku filan oo ay ku qorsheeyaan oo ay si gaar ah u soo saaraan markab awood u leh inuu qaado dad tiro yar ama yar oo gudaha ah, tani waxay noqon lahayd mid aad u dhib badan oo nasiib darro ah teknolojiyaddu suurtagal kama dhigayso, ugu yaraan hada sida codadka qaar ee awooda inay matalaan Breakthrough ay mar hore faallo ka bixiyeen.
Sprite, markab interstellar ah oo kaliya dhexroor 3,5 sentimitir ah iyo 4 garaam oo culeys ah
In yar oo ka sii faahfaahsan, u muuqda maalinta Juun 23 ee sanadkan 2017, kooxdii cilmi-baarista waxay ku guuleysteen inay hawada u soo bandhigaan wax ay iyagu ugu yeereen dufcaddii ugu horreysay ee tijaabo ah oo ka kooban wax aan ka yarayn lix cutub oo ka mid ah fasalka cusub ee hawada sare ee hawada sare galay. Lixdaan cutub ayaa lagu baabtiisay magaca Sprites waxayna u taagan yihiin cabir cabbirkoodu yahay 3,5 sentimitir oo keliya dhexdooda, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay jaangooyaan culeyska kaliya qiyaastii afar garaam.
Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan waxaas oo dhan, sidaa awgeed waxaa ugu yeeray koox cilmi baarayaal ah jiil cusub oo dayax gacmeedyo dhex dhexaad ah, ayaa ah mahadnaq ka helista habeynta qaybaha, cilmi-baarayaasha iyo injineerada ka dambeeya horumarintani waxay ku guuleysteen inay dhexgalaan oo ay u banneeyaan anteeno, processor iyo dhowr dareemayaal yaryar mas'uul ka ah qaadashada cabbiraadaha la xiriira gobolka iyo xaaladda Sprite-ka.
Maraakiibtaan ayaa la filayaa inay ku gaaraan Alpha Centauri 20 sano oo kaliya.
Ujeedada ugu weyn ee mashruucan waa in lagu soo bandhigo kumanaan ka mid ah dayax gacmeedyadan Alfa Centauri, haddii ay dhacdo inaadan aqoon, waxaan ka hadlaynaa nidaamka interstellar ee noogu dhow. Fikradda ka dambeysa mashruucan waa mid aad u fudud, haddii aan maareynno sameynta mashiinno runtii yar yar, waxaan ku gaari karnaa geesaha kala duwan ee adduunka si aad u dhaqso badan iyo si aad u fudud.
Marka laga hadlayo mashruuca laftiisa, sida ay maareeyayaasheedu u faalleeyeen, bilowgiisuna wuxuu ahaa mid guul ku dhammaaday maraakiibtana horay ayay u shaqeeyaan Ujeeddada isla waa in mid kasta oo ka mid ah uu u safri karo a xawaaraha sare ee qiyaastii 60.000 kilomitir saacaddii iyo in, markay gaaraan Alpha Centauri, ay sii wadi karaan inay xogta u diraan dhulkeenna.
Marka loo eego xisaabinta ay sameeyeen kuwa masuulka ka ah mashruucan, waxay umuuqataa inaan wali sugi doonno ilaa 20 sano ilaa maraakiibtaan ay gaarayaan Alpha Centauri. Marka loo barbardhigo tikniyoolajiyadda hadda jirta, taas ayaa kuu sheegi doonta, haddii ay dhacdo in la rido gantaal, waa inaan sugnaa ilaa 100 sano.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee dhex dhexaad ah ayaa durba ku jira hawada sare
Maraakiibta hadda socda iyo xawaare dhan 60000 km / h waxay ku qaadaneysaa ku dhowaad 70000 sano in lagu gaaro Alpha Centauri.
Ku jawaab tom
Nintendo wuxuu wajahayaa dacwaddii ugu horreysay ee Nintendo Switch Joy-Con